अन्तिममा आएर भाँडियो लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा बिलय हुने तयारी
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा बिलय हुने कुरा अन्तिममा आएर भाँडिएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकाले समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि र कांग्रेसले फोरमबाट आएका नेताहरुका लागि...
प्रगतिशील शक्तिलाई सहयोग गर्छौँः वैद्य
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्यले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक पक्षधरका उम्मेदवारलाई सहयोग गरिने बताएका छन् । पार्टीको यही असोज २२ देखि २६ गत...
तेह्रथुमका सात दलबाट उम्मेदवार सिफारिस
तेह्रथुम । दलहरुले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् । अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेकपा (माले), राप्रपा(प्...
१० विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १ सय १३ बमोजिम आज १० विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकबाट पारित राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, २०७४, अपांगता भएका ...
काठमाडौं । मो. रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेताहरुले निर्माण गरेको वाम लोकतान्त्रिक जनपक्षीय मञ्च र आधुनिक नेपाल पार्टी समाहित भएका छन् । ...
काठमाडौँ । यस वर्षको भाइटीकाको साइत कात्तिक ४ गते शनिबार मध्याह्न ११:५१ मा उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले सो समय अभिजित् (विजय) मुहू...
मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी सहरका विभिन्न सडकहरुमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली ‘अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम’ जडान गरिने भएको छ । मेक्सिको सिटीमा पछिल्लो समयमा गत सेप्टेम्बरमा गएका दुई ठूला भूकम्पबाट ठूलो...
धनगढी । विवेकशील साझा पार्टी प्रदेश नम्वर ७ ले प्रादेशिक सभा निर्वाचनका लागी सामानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहको नाम टुङगो लगाएको छ । प्रदेश कमिटीको बैठकले प्रादेशिक सभा सामानपातिक तर्फका उम्मेदवारहको नाम...
स्वास्थ्य प्रयोगशालामा कर्मचारी अभाव हुदा सेवा प्रवाहमा समस्या
धनगढी । प्रदेश नम्वर ७ का अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरवन्दी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । वर्षौ पहिले यसक्षेत्रका ठुला स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एक दुई जना प्रयो...
चलचित्र “रोमियो” को ट्रेलर सार्वजनिक,लभ स्टोरी जस्तै चल्ने निर्माण टोलीको अपेक्षा
काठमाडौं । लभ स्टोरी चलचित्रले बजारमा राम्रो व्यापार गरिरहेको समयमा कात्तिक २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘रोमियो’को ट्रेलरले आशा बढाएको छ । एचआरके प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र...
घरभित्र भुत आए पछि भागा भाग (भिडियो सहित)
काठमाडौं । भुत प्रेत जस्ता कुराहरुको बारेमा धेरै बहस हुने गर्दछ तर वास्तबमा भुत हुन्छ या हुदैन हाम्रो समाजमा पूर्ण रुपमा पुस्टि हुन नसके पनि यहि समाजमा बस्ने कोहि कोहि आफुले भुत देखेको दाबि पनि गर्छन ...
संविधानका असन्तुष्टि आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानभित्र रहेका असन्तुष्टिलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन...
काठमाडौँ । सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकालमा महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने काम भएको बताएकी छन्। संसद्को आजको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले संसद्को कार्यकालभरीमा ६ सय ६६ दिन...
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान लेखनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पार्टीका सांसदहरुलाई बधाइ दिएका छन् । पार्टी संसदीय दलको कार्यालय...
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले केही दिनअघि गठन गरेको संसदीय समितिमा पाँच सदस्य थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज संसदीय समितिमा सदस्य थप गर्नुभएको पार्टीका नेता मीनबहा...
देउवालाई निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)सँग आवद्ध विभिन्न भातृसंगठनले निर्वाचनको मुखमा आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रेस चौतारी...
हेनुहोस् ,यसरी गरिदैछ सांसद् सदस्यहरुको विदाई (Live)
संविधान सभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तिम बैठक अहिले बसिरहेको छ । संसद्को अन्तिम बैठक बस्नुअघि सभामुख ओनसरी घर्तीसहित सांसदले सामूहिक तस्वीर खिचाउने कार्यक्रम रहेको थियो । अपराह्न ३ बजेबा...
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ८५ हजारबराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार ३९ लाख ४३ हजार ८१० कित्ता शेयर कारोबार भएर नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तु...
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले अनलाइनमार्फत् विद्युत्को महसुस भुक्तानी सेवा शुरु गरेको छ । यो सेवा शुरु गरेसँगै बढ्दो ग्राहक संख्या र जनशक्ति अभावमा विद्युत् महसुल तिर्न घण्टौ...